Wararkii ugu dambeeyay doorashooyinka Somaliland | KEYDMEDIA ONLINE
Wararkii ugu dambeeyay doorashooyinka Somaliland
Waxaa lasoo gabagabeeyay tirinta codidka labada gole, kan wakiilada iyo deegaanka Somaliland, iyadoo lagu dhawaaqay natiijada doorashooyinkaasi.
HARGEYSA, Somaliland - Waxaa lagu dhawaaqay natiijada doorashooyinkii Somaliland ee ka socotay toddobaadkii u dambeeyay degaannada Somaliland.
Golaha Wakiillada Somaliland: Xisbiga Waddani ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan Golahaasi. Taas oo ka dhigan in xsbiyada mucaaradku ay heleen aqlabiyadda golahaas. Waxa sidoo kale xusid mudan in aanay jirin wax haween ah oo ka mid noqday golaha cusub.
Tirada guud ee golaha wakiilada ayaa ah 82 kursi kuwaasoo dhammaantoodba aan ku jirin wax dumar ah. 31 kamida kuraastaasi waxaa helay xisbiga mucaaradka Waddani halka 21 kamid ahna uu helay xisbiga Ucid, iyadoo xisbiga talada haya ee Kulmiyana uu helay 30 kursi.
Doorashada Somaliland ka dhacday ayaa umuuqata mid ka duwan doorashooyinkii hore, sidoo kale waxaa iyana isbaddal uu ku yimid rajadii laga qabay in xisbiga talada haya ee Kulmiye uu guulo ka gaari doono doorashooyinka soo gabagaboobay ee golayaasha wakiilada iyo degaanka maamulka Somaliland.